Pokémon GO: chii chichauya munguva pfupi kumutambo wenguva ino | IPhone nhau
Pokémon GO: chii chichauya munguva pfupi kumutambo wenguva
Sezvawakatotaura kare mune posvo, hongu, iPhone News inoita kunge yakapihwa zita "Pokémon Nhau" mumazuva apfuura. Asi hazvisi zvedu chete: Pokémon GO iri kutobuda panhau, zvirinani uye zvakaipa. Zvinonzwisisika kuti vamwe venyu munganetseke kuti tinotaura zvakanyanya nezve chimwe chinhu kunyanya chisina zvakawanda zvine chekuita neiyo iPhone, asi ichi ndicho chinhu chataifanira kuitawo izvozvi rinopfuura gore rapfuura neApple Tarisa uye, dzikama, isu tinofanirwa kufukidza zvese ruzivo izvozvi, asi (ndinofungidzira) zvese zvichadzokera pane zvakajairwa mumavhiki mashoma. Chero zvazvingaitika, usakanganwa kuti mutambo uyu unowanikwawo kune iyo iPhone.
Pokémon GO ndiwo mutambo wenguva uye ndiani anoziva kuti inguva yayo ichaguma. Kune nhau dzemarudzi ese, senge vashandisi vari kutsvaga Pokémon uye vanowana chitunha chemunhu, mazana (kana zviuru) zvevashandisi vanomhanya vachitevera Vaporeon muCentral Park kana, izvi munguva pfupi yapfuura, munhu anopfura vatambi vaviri vePokémon GO for kutamba pamberi peimba yako. Zvatinokuunzira nhasi ruzivo nezve chii chichauya kumutambo urikukurudzira idzi dzese nyaya uye zvinoita sekunge Pokémon GO iri kuzovandudza, uye yakawanda, mumavhiki anotevera.
1 Mamwe marudzi ePokémon ari kuuya, kusanganisira Ngano
2 Akanakisa Pokémon Ekutevera Maturu
3 Trade Pokémon neshamwari
4 Pokémon inorwa neshamwari
5 Ona zvimwe Pokémon GO zvikamu mune chairo pasirese
6 Zviitiko zvakakomberedza maguta
7 Kurwisana kwechikwata
8 Kugadziriswa kwemajimu uye PokéStops
Mamwe marudzi ePokémon ari kuuya, kusanganisira Ngano
Sezvo nezve chero kuburitswa, yekutanga vhezheni yePokémon GO inosanganisira yakawanda Pokémon, asi kwete ese. Vagadziri vemitambo vanoziva izvi uye vachawedzera zvimwe, kusanganisira Ngano Pokémon.
Zvichida kuti mapoka eshamwari kukunda mamwe matambudziko kutora iyo yakakurumbira Pokémon iyo inomiririra timu yako. Chinhu chakashata cheichi ndechekuti: ndiani achave nerombo rakanaka kuwana iyi mhando yePokémon mune imwe yevavo Pokéballs?
Akanakisa Pokémon Ekutevera Maturu
Kana iwe uri kutamba Pokémon GO, iwe unogona kunge wakaziva kuti kuzviwana hazvisi nyore zvachose. Ini ndinofunga kuti parizvino kana isu tine Pokémon padhuze ine dambudziko rakafanana kumirira kuti vaoneke pachiratidziro pane kufamba nekuzviwana pachedu. Muchikamu chezasi kurudyi che skrini tinoona iyo 3 Pokémon iyo tava pedyo. Kana tikabata iyo diki bhawa, sarudzo inonzi «Pedyo» ichavhurika, kwatichaona kusvika pa9 Pokémon yatinayo yakatikomberedza (chenjera, muchirongwa cheJapan, ndiko kuti, yepedyo ndiyo iri kumusoro kurudyi uye kwete uya ari kumusoro kuruboshwe). Iwo atakatoona / kuyedza kuvhima achave ari muvara, nepo iwo atisati tamboona achazoonekwa mune silhouette fomu. Izvi zvese zvakanyatsonaka, asi ndinoenda kupi kana ndichida kuzviwana? Pasi pega Pokémon pane nhanho nhatu idzo, murondedzero, dzinotiratidza kure kwavari, asi handisati ndamboona matanho mashoma. Zvandakaona mamwe madenderedzwa pamepu ayo, zvakare mune dzidziso, anoratidza nhanho dzePokémon yatinayo yakatikomberedza.
Zvese izvi zvakatsanangurwa, zvinoita kwandiri kuti "zviwanikwa" hazvina kukwana. Vagadziri vemutambo vanofungawo saizvozvo uye ichaunza mamwe maturusi, senge mafambiro atinofanira kutora kuti tiende kune yakasarudzika Pokémon.
Trade Pokémon neshamwari
Ini handisati ndambove fan weaya "Pocket Monsters" (ndiro raive zita ravo rekutanga) uye ini handinyatso kuziva zvese nezvavo, asi ndinoziva kuti chikamu chekukwezva kwavo chiri kuvaunganidza. Mupfungwa iyi, tinogona kutaura kuti tiri pamberi mhando yekuunganidza senge iwo anga achitenga mamwe magwitsi makore apfuura. Zvatakaita muzviitiko izvi kwaive kuchinjana makadhi, zvinonamirwa kana chero zvataiwana nedzimwe shamwari dzaive nezvataida uye vaida zvatiinazvo.
Paunenge uchitamba Pokémon GO kwemazuva mashoma, unofanirwa kunge wakawana zvakapetwa zvinoverengeka (eh, Rattata naPidgey?). Kunyangwe mazhinji ezvinyorwa zvichave Pokémon yatichawana kunyangwe pasi pemubhedha wedu, tinogona zvakare kuwana maviri echimwe chinhu chinonakidza, senge maviri Charmander kana Raticate. Kana tiine imwe yatisingade, tine shamwari ine imwe yatinoda uye shamwari iyi inoda chimwe chinhu chatinacho, munguva pfupi tinogona kuzvitsinhanisa.
Ehezve, ini ndoda kutaura nezve chidimbu chezano randakaverenga mazuva ano: zvakakosha kuchengetedza imwe chete yeimwe neimwe, kusanganisira neayo epasi nhanho. Sei? Zvakanaka, nekuti tinogona kugara tichivabatanidza nevamwe uye kuwana yakakosha Pokémon.
Pokémon inorwa neshamwari
Nzira yakanakisa yekudzidza kurwira uye kuti yedu Pokémon ive yakasimba ndeyekurwa. Parizvino tinogona kurwira mumajimu, shamwari uye vavengi, asi munguva pfupi isu tichakwanisa rwisana neshamwari. Kureva, chitima. Icho chinhu chinosvika, asi hachizivikanwe chaizvo kuti riini.
Ona zvimwe Pokémon GO zvikamu mune chairo pasirese
Chinhu chakanakisa nezve Pokémon GO ndechekuti inosangana nenyika chaiye. Pamusoro pekugona kwekuvhima iyo Pokémon uchishandisa kamera uye Augmented Reality, inoshandisawo Google Mepu, saka patinenge tichifamba munyika chaimo, isu tichafamba muKokémon GO. Uye zvakare, iyo Poké inomira uye magyms ari munzvimbo chaidzo munzvimbo medu, saka tinogona kuona Poké inomira muraibhurari kana horo yeguta reguta redu (ine pikicha nezvose!).
Zvinoita sekunge ichi chingori kutanga kweAugmented Reality (AR) mumutambo uyu. Uye ndeyekuti iyo CEO yeNiantic yakatsanangura zvese izvi se "danho rekutanga rakakura." Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, isu tinogona kuona mafambiro uye zvimwe zviratidzo pamusoro pechimwe chinhu chiri munyika chaiye. Ndozvazviri Kuwedzera Kwechokwadi kuri nezve, handiti?
Ehezve, zviri pachena kuti kuti tione iyi mhando yeruzivo isu tichafanirwa tarisa kubva kune inoenderana mudziyo. Parizvino, michina iyi mafoni edu, asi zvishandiso zvinoenderana zvinogona kusvika munguva pfupi, senge Magetsi Kubva. Pandinonyora izvi, hazvigoneke kuti ndimire kufunga nezveGoogle Girazi, magirazi asina kunakidzwa nekubudirira kwaitarisirwa panguva iyoyo, asi izvo zvaigona kuona magumo avo achichinja nemutambo wakaita sePokémon GO.
Zviitiko zvakakomberedza maguta
Pokémon yanga ichibudirira kwazvo kubvira pakaburitswa mutambo wayo wekutanga makore makumi maviri apfuura. Ndakaona paTV kuti kune makwikwi pasirese uye, kana ndikarangarira nemazvo, pandakaona zvinyorwa kana zvakafanana makore mazhinji apfuura, yechitatu pasi yaive Spanish. Nebudiriro yakadaro, chinhu chakanakisa kune ivo vagadziri ndechekuishandisa zvizere. Iyo zviitiko zvichave mumaguta Ivo vanozoganirwa nenguva, saka zvichave zvakakodzera kuronga pamwe nevamwe vese vechikwata kuti vabudirire chinangwa chedambudziko. Izvo zvakare zvinoita kuti isu tinoda murairidzi ane yakakwira nhanho yekutora chikamu mune izvi zviitiko, saka ngatidzidzisei!
Zvichida zviitiko zveguta rese zvakanyanya. Kana iyi iri nyaya yako uye iwe uchida chimwe chinhu chakaganhurirwa, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo machisi echikwata.
Kugadziriswa kwemajimu uye PokéStops
Kwazisai varidzi ve3 gyms (AlexxMS13, Nest64 uye Atomic94 -makorokoto, iwe une Vaporeon isina kumhanya smartphone muruoko kuburikidza neCentral Park-) iyo yandinoona kubva pano 😉
Kana isu takarwira gym uye iri yedu, haingave iri pfungwa yakanaka kuishongedza kuitira kuti tifarire mufananidzo wayo zvakanyanya? Niantic anofunga zvakafanana uye akavimbisa izvozvo tinogona kuzvigadzirisa munguva yemberi.
Zvakadii nezvese izvo zvichiri kuuya izvo iwe zvaunoda kwazvo kuona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO: chii chichauya munguva pfupi kumutambo wenguva
"Zvakanaka, nekuti tinogona kugara tichivabatanidza nevamwe uye kuwana yakakosha Pokémon."
Que? Sanganisa pokémon ?? Kubva riinhi? Nekuremekedza kwakakodzera, ndinotenda kuti izvi hazvigoneke, uye hazvizove zvakadaro, uye hazvina kumboitika ...
Apple haizovimba Samsung kuti iite processor A11 kana; ichaenderera neTSMC